मारियो भेगास ललोसा द्वारा "शहर र कुकुर" पुस्तकको संक्षिप्त सार वर्तमान साहित्य
मारियो भर्गास लोलोसाको पुस्तक र शहर र कुकुरहरूको संक्षिप्त सार
पेरुभियाका लेखक मारियो वर्गास लोलोसा र उनले स्पेनी-अमेरिकी कथाको महान व्यक्तित्वको कथा अनुसन्धान र उपन्यास संसारमा उनीहरूको जटिलताको महान अनुसन्धानका लागि आफ्नो काम प्रकाशित गरे। "कुकुरको शहर" १ 1962 .२ मा। यो लेखकको पहिलो काम थियो र आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पहिलो पनि हो बूम
En "शहर र कुकुरहरू", लिमाको मिलिटरी स्कूलमा मसिस्मो र हिंसाको निन्दाको माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्दछ, पेरू समाजको आलोचना।
तपाईं मध्ये जो कल बाट संदर्भित छ थाहा छैन उछाल साहित्य को, को महान सफलता संग मेल खान्छ ल्याटिन अमेरिकी उपन्यास जुन शुरुमै शुरु भयो सत्तरी दशक लगभग यस उदासीनतामा, केहि रचनाहरू देखा पर्‍यो जसले कथाको परम्परागत रूपहरूसँग विच्छेदन गरे र एकै समयमा उनीहरूका लेखकहरूको नाम विश्व प्रसिद्ध बनाए। ती मध्येका कदका उपन्यासकारहरू हुन् जी। गार्सिया मार्क्वेज, कार्लोस फुएन्ट्स र मारियो भार्गास लोलो अरू धेरैमा। तिनीहरूले त्यहाँ फराकिलो र धेरै अन्तर्राष्ट्रिय भाषा त्यसबेला सम्म प्रयोग गर्छन्।
1 "शहर र कुकुरहरू", यसको बारे के छ?
1.1 कुकुरको नामकरण
1.2 स्कूल मा घटनाहरू
1.2.1 रसायनिक परीक्षणको चोरी र क्याडेटको मृत्यु
1.2.2 अल्बर्टोको गवाही र जगुआरको संलग्नता
1.3 स्कूल पछि जीवन
"शहर र कुकुरहरू", यसको बारे के छ?
शहर र कुकुरहरु ...
"शहर र कुकुरहरू"मा प्रकाशित भयो 1962, लिमाको एक मिलिटरी स्कूलका युवा विद्यार्थीहरूको समूहमा बृद्धि भएको क्रूरताको बयान गर्दछ। विभिन्न कथागत स्रोतहरू मार्फत, त्यस समयको लागि एकदम नवीन, भेगास लोलोले गलतफहमी भएको सैन्य शिक्षाको नतिजा उजागर गर्दछ र त्यो संसारको भ्रष्टाचार र यसको अहिलेको हिंसाको पनि निन्दा गर्दछ।
अर्को, हामी धेरै संक्षिप्त सारांशमा जाँदैछौं (यदि तपाईं यसलाई पढ्न चाहानुहुन्छ भने राम्रो छ कि यस लेखको पढाइ यहाँ छोड्नु राम्रो हुन्छ), केहि अंशहरू यसलाई बनाउने।
सैन्य कलेज एक संस्था हो जुन विभिन्न केटाहरूले हाई स्कूलको अन्तिम तीन वर्षको अध्ययन गर्न पहुँच पाउँदछन्। यसमा, विद्यार्थीहरूलाई हिंसात्मक र घोर वातावरणको अधीनमा राखिन्छन्। Th औं ग्रेडरहरूले त्यस बर्ष नयाँ प्रवेशकर्ताहरूको लागि क्रुर अनुष्ठान प्रदर्शन गर्दछन्। यसको प्रतिक्रियामा, केही युवाहरू तथाकथित "सर्कल" गठन गर्छन्, जुन समूहले चौथो तहमा बदला लिने निर्णय गर्दछ। यो जगुआरको नेतृत्वमा छ, हिंस्रक केटा जसले आफ्ना विपक्षीहरू विरूद्ध कडा आक्रमण गर्ने योजना बनाउँदछ र जो बाँकी केटाहरूको पनि नेता हुन जान्छ जसलाई उसले हिंसा निम्त्याउँछ। रिकार्डो अराना, केवल एक मात्र जो छेउछाउमा रहन्छ, पूर्ण अनैच्छिक रूपमा उनलाई धक्का दिन्छ र यसको लागि उसले क्रूर पिटाई पाउँछ। यस क्षण देखि उनी लगातार आक्रमण र बाँकी क्याडेट्स द्वारा अपमान गरिएको छ।
स्कूल मा घटनाहरू
रसायनिक परीक्षणको चोरी र क्याडेटको मृत्यु
कावा, स्कूलको विद्यार्थीहरू मध्ये एक, जगुआरको निर्देशनहरूको अनुसरण गरेर रसायन विज्ञान परीक्षण चोरी गर्दछ। अधिकारीहरूले अपराधको बारेमा थाहा पाउन सक्छन् यद्यपि तिनीहरू अपराधीलाई पहिचान गर्न सक्षम छैनन्। यसैले उनीहरूले सबै युवा व्यक्तिहरू विरूद्ध बदला लिने र तिनीहरूलाई लक गर्ने र स्कूलमा अनिश्चित कालसम्म राख्ने निर्णय गरे। धेरै हप्ता कैदमा परेपछि स्लेभ भनेर चिनिने चरित्रले अफिसरहरूको अगाडि कावाको भर्त्सना गर्‍यो र उसलाई बाहिर निकालियो। यद्यपि, केहि चालको क्रममा एउटा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट्छ ... एक क्याडेटले एक अनौंठो स्रोतबाट बुलेट प्राप्त गर्दछ र मर्दछ ...
अल्बर्टोको गवाही र जगुआरको संलग्नता
कविलाई उपनाम दिइएको अल्बर्टोको स्लेभ (रिकार्डो अराना) को लागी प्रशंसा थियो। यस कारणले, उहाँ आफ्ना स्कूलका साथीहरूको अनियमितताको भर्त्सना गर्नुहुन्छ र जगुआरलाई लेफ्टिनेन्ट गाम्बोआमा आरोप लगाउनुहुन्छ। ऊ अराणाको हत्यारा हो भन्ने शंका गर्छ तर ऊसँग पर्याप्त प्रमाण छैन। लेफ्टिनेन्टको हस्तक्षेपको कुनै काम हुनेछैन; उनको वरिष्ठ अधिकारीहरूले संस्थाको छवि बिगार्ने घोटालाहरूबाट जोगिन अनुसन्धान गर्न अस्वीकार गर्छन्। तिनीहरूले अल्बर्टोलाई उनको मौनता प्राप्त गर्न र लेफ्टिनेन्टको स्थानान्तरण गर्न आदेश दिन्छन्। कविले प्रदान गरेको जानकारीका लागि सजाय पाएका क्याडेट्स, गल्तिले विश्वास गर्छन् कि द्वेषको क्षणमा जगुआरले उनीहरूलाई दिए। त्यसपछि उसले आफ्ना साथीहरूको अपमान र अपमान प्राप्त गर्दछ र पहिलो पटक एक्लो महसुस गर्दछ।
स्कूल पछि जीवन
बाँकी क्याडेट्सको मनोवृत्ति देखेर निराश जग्वारले गम्बोआलाई आफू दोषी हुँ भनेर स्वीकारे। ऊ पश्‍चात्तापी छ, समर्पण गर्न इच्छुक छ, र परिणामको सामना गर्न तयार छ। तर गाम्बोलाई थाहा छ कि स्कूलमा कोही पनि उनको कबुली सुन्न रुचि राख्दैनन्। यो तपाइँलाई गल्तीबाट सिक्न र तपाइँको जीवन को लागी संशोधन गर्न आग्रह गर्दछ। जगुआर अन्ततः समाजमा एकीकृत हुन्छ र विवाह गर्दछ।
तपाईले मर्नु अघि पढ्नु पर्ने पुस्तकहरू, भर्गास लोलोका अनुसार
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » मारियो भर्गास लोलोसाको पुस्तक र शहर र कुकुरहरूको संक्षिप्त सार
मारिया अना भन्यो
निस्सन्देह यो एक सुन्दर साहित्य हो। म पुस्तक अधिग्रहण गर्ने विचारमा छु, किनकि म यस विषयको प्रेममा परेको थिएँ
मारिया अनालाई जवाफ दिनुहोस्
कृपया कसले यो लेख्ने हो जसले हिंसाको पर्यायवाचीको रूपमा माचिजो प्रयोग गरिरहेको छ, वर्तमानमा के यो शव्दको दुरुपयोग र दुरुपयोग, यी बर्ष २०१ 2018 मा के बकवास छ, तपाईले हिंसा प्रयोग गर्नुपर्‍यो, जसमा कुनै लि gender्ग र माचिसमो छैन जुन सबै हिंसा र नारीवादी वैचारिक बकवास।
Sabiondo लाई जवाफ दिनुहोस्
धन्यबाद, यसले मलाई soooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo सेवा गर्‍यो ...
PASHI लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार मित्रहरु इन्टरनेट उपयोगकर्ताहरु, बधाई र चुम्बन wapos
डोरा बाट डिएगो भन्यो
म गुज्मेन वा गोमेज गएँ र तीन डलरको बुरिटो पाइन तर लेडीले अ english्ग्रेजी बोलेनिन त्यसैले मैले भने कि कृपया मलाई डरलाग्दो टेको बिच दिनुहोस् र त्यसपछि उनी मेक्सिकन अश्लील उद्योगको लागि वेश्या बन्न थालिन्। चाँडै मैले उसलाई बोलाए र उनले मलाई suk suk दिए, जसमा फ्रि सॉस समावेश थियो। त्यसपछि उसले टोर्टेलामा स्खलन गर्नु अघि गधामा लिए। त्यसपछि उनी फेरि केन्यामा निर्वासनमा परिणत भइन्, मतलब वेनेजुएला जहाँ उनको हजुरआमाले आर्पा डे क्र्यापको साथ उनलाई पर्खिरहेकी थिइन्। एर्पा नर स्पन्क र महिला मलको साथ भरिएको थियो, यो एकदम scrumptious थियो र मेरो टिया मारियास खाना पकाने पुस्तक मा समाप्त भयो जहाँ मारियो टेस्टिनोको लागि लाइव टिभीमा खाना पकाउन सुझाव दिइएको थियो, जहाँ उनले पुस्तकमा नट गरे, र पुस्तक अब छैन। स्पन्कको कारण खोलियो। त्यसपछि उनी बजार गए उनको चिल्ला कोन कार्नको लागि उत्पादन लिन र उसले गल्तीले समलिंगी गाईको मासु किनेको थियो। जो क्लेमाइडियाको साथ इंजेक्सन गरिएको थियो। डिएगोले मारियोलाई भने, "माफ गर्नुहोस् साथी, तर यो तपाईको समलि .्गी जस्तो देखिन्छ, त्यसैले हामी तपाईलाई मेरो प्रिय हजुरबा हजुरआमा तामाले तपाईलाई समलिay्गी हटाउनेछौं जुन माया र मायाका साथ पकाइएको छ।
डोराबाट डिएगोलाई जवाफ दिनुहोस्
कमिला avila भन्यो
मलाई यो कार्य धेरै मनपर्दो छ जस्तो लाग्छ मैले3पटक यो पढें
कमिला अविलालाई जवाफ दिनुहोस्
निकोल GONZALES रमोस भन्यो
जगुआर सबै भन्दा पछि आफ्नो गल्तीबाट सिक्ने र आफ्नो जीवनमा संशोधन गर्ने, आफूले गरेको सबै कुराको बारेमा सचेत हुँदै र विवाहको लागि।
निकोल GONZALES रमोजलाई जवाफ दिनुहोस्
चिनियाँ नयाँ वर्ष। Books वटा पुस्तकहरू आकर्षक शहरको नजिक पुग्न
तपाईंको साहित्यिक पात्रहरूका लागि राम्रा नामहरू छान्ने युक्तिहरू